काठमाण्डौ उपत्यकामा एक जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृ’त्यु « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं- पाटन अस्पतालमा उपचाररत एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ३८ वर्षीय संक्रमित महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डा विष्णु शर्माले जानकारी दिए। डा शर्माका अनुसार उनको गए राती १ बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। १८ गते अस्पताल भर्ना भएकी ती महिलामा इन्सेफ्लाइटिसको समस्या पनि थियो।
कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा उपचाररत २ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना लक्षण देखिएर अस्पतालमा भर्ना गरिएका कपिलवस्तुका २५ र ४२ वर्षीय पुरुषको गएराति मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जानकारी दिएको छ । जसमा एक जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने अर्का एक जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा राजेन्द्र खनालका अनुसार आइसियुमा भेन्टिलेटरको सहायतमा उपचाररत संक्रमितको गए राती उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। कपिलवस्तु तौलिहवाका ४२ वर्षीय ती पुरुषामा निमोनियाको समस्या देखिएको थियो। उनलाई २५ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। दुवैजनालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको थियो । कपिलवस्तुका २५ वर्षीय युवालाई हिजो मात्रै प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो । उनलाई त्यहाँको अस्पतालले रिफर गरेर राति १२ बजे ल्याइएको थियो भने २ बजे मृत्यु भएको डा. गौतमले बताए । उनीहरुमध्ये एकजना तौलिहवाका हुन् भने अर्का कृष्णनगरका हुन् । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु संख्या ८५ पुगेको छ।
दुखद घटना ! आगो लागेर घर र गोठ ज’लेर न’ष्ट हुँदा खाने एक छाक अन्न पनि नरहँदा परिवार भोकै